ဗီယက်နန်ဖက်ထုပ် | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
Crispy Aromatic Duck →
ဒါလေးကို တင်မယ်တင်မယ်နဲ့တော်တော်ကြာနေပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ အလုပ်ရှုပ်နဲနေတာမို့ တင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီဖက်ထုပ်လေးရဲ့ထူးခြားချက်က ကြည်ပြီးအတွင်းအစာတွေကို မြင်ရတာရယ်၊ ကြက်သွန်မြိတ် ဆီသတ်အနံ့လေးမွှေးတာရယ်၊အိသက်အကြိုက် စပ်တဲ့အရသာလေးရယ်ကြောင့်ပါ။ လုပ်ရတာလဲမခက်ပါဘူးနော်။
– Tapioca Flour ၃၀၀ ဂရမ်
-ရေနွေးဆူဆူ ( အကြမ်းပန်းကန်လုံး၁လုံးစာ)
Tapioca Flour ကို ရေနွေဆူဆူထဲ့ပြီး ဇွန်းဖြင့်မွှေပေးပါ။ ရေနွေးပူတာရောထားတော့ အပူသက်သားအောင်ဇွန်းနဲ့ကြာကြာမွှေပေးပါ။ သစ်သားယောင်းမဆိုရင် မွှေရတာပိုကောင်းပါတယ်။ ဆိုစကားတောင်ရှိပါတယ် ယောင်းမဆိုတာ မွှေတဲ့အမျိုးတဲ့ နော် စတာပါ ကျမယောင်းမလေးများ ဖတ်နေရင် ရီရအောင်လို့ပါ။ အပူနဲနဲရော့သွားရင် လက်နဲ့နယ်ပေးရပါမယ်။ ဒီ dough က ပျော့ပြီးနေရပါမယ်နော်။ ဆွဲလိုက်ရင်ပါလာတာမျိုးပါ။
၁၀ မိနစ်ခန့်နယ်ပြီးရင် ဂျုံးလုံးလေးများ ၁၀ ဂရမ်ခန့်အလုံးလေးများယူပြီး လက်မ နှစ်ဖက်ဖြင့်ပုံပါအတိုင်းလိုက်ပြားပေးပါ။ အချင်း၂လက်မ ပတ်လယ်ရှိတဲ့အပြားလေးရပါမယ် (အတိအကျဖြစ်ရန်မလို) အဲဒီ ပေါ်မှာ ချက်ပြီးသား အသား( သို့ ) ပုဇွန် တတုံးစီထုတ်ပြီး ကွတ်ကီးဖြတ်တဲ့အဝိုင်းလေးနဲ့ ဖြတ်ရင်ပုံဖော်ပြီးသားဖြစ်ပါမယ်နော်။
ဖတ်ထုတ်များရေနွေးတွင်ပြုတ်ပြီး ရေပေါ်ပေါ်လာရင်ဆယ်ကာ ရေခဲရေထဲထဲ့ပေးပါ။ အဲဒီအခါမှ ဖတ်ထုတ်ကြည်လာပါမယ်။
အထက်ပါများရောလိုက်ရင်အချဉ်ရည်ရပါပြီ။ အရသာရှိရှိ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
By eithet • Posted in ဗီယက်နန်အစားအစာ
6 comments on “ဗီယက်နန်ဖက်ထုပ်”
13/11/2012 @ 5:28 am
ဒါမျိုးလေး လုပ်စားကြည့်အုံးမယ် မ ရေ ။။။
thank you cho chit 🙂
13/11/2012 @ 9:47 am
အဲလိုကြည်ကြည်လေးစားချင်နေတာ ဖက်ထုပ်ရွက်လုပ်နည်းလေးခုမှသိတော့တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အိသက်ရေ
16/11/2012 @ 8:19 am
Look so good ! Thanks for sharing,sis !
welcome sis yay 🙂
17/02/2013 @ 6:40 am
ဒီဟာလေးကိုfood magazine မှာဖတ်ပြီးပြီ…လုပ်စားကြည့်မယ်..:)